SMOOTH-Q2: Zhiyun's Pocket-Size Gimbal Ugbu a | Akụkọ akụrụngwa
OWO-Q2: Gimbal nke si n'akpa uwe Zhiyun
Eder Esteban | | Ngwa, Ngwa
Ala gimbal na-eto eto ruo oge ụfọdụ yana ọtụtụ nhọrọ dị iche iche. Zhiyun ugbu a na-ahapụ anyị na nke ya ụdị nke ngwaahịa a, e mere nke mere na anyị nwere ike inweta anụ na elu mma videos. Companylọ ọrụ ahụ na-ewetara ya SMOOTH-Q2 gimbal na ọkwa, nke ga-enyere anyị aka ma a bịa n'ịdekọ vidiyo dị mma na nkwụsi ike.
Ọ bụ ezie na SMOOTH-Q2 a kwụpụtakwara maka obere obere ya. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ na-ahapụ anyị ụdị ụdị akpa uwe, na-eji ma na-ebugharị ọkachasị ma dị mfe oge niile. Ya mere maka ọtụtụ ndị ọ bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị.
N'adịghị ka ụdị ndị ọzọ dị n'ahịa, Zhiyun SMOOTH-Q2 abịaworị na nha belatara. Ya mere, anyi ekwesighi igbati ma obu tinye ya mgbe anyi ga eji ya. Ọ bụ 204 mm ogologo, nke na-eme ka ọ dị nnọọ mfe iburu anyị ebe niile. Anyị nwere ike iji akwa nkasi obi buru ya n'ime akpa azụ. Na mgbakwunye, nke ejiri akụkụ ahụ aluminom mee, ọ bụ ihe atụ siri ike, mkpuchi silicone na-eme ka ọ dị mma ijide mgbe anyị ga-eji ya.
Akụkụ ọzọ dị mkpa nke gimbal a bụ na ọ dị mfe iji. Ebe ọ bụ na o nwere ọtụtụ ụdịdị ojiji, nke imeghari n'ọnọdụ dị iche iche, yana anyị nwere ike ịgbanwe n'etiti ụdịdị n'oge ọ bụla site na ịpị otu bọtịnụ. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ ewebata usoro ọhụrụ na gimbal a, nke mere na ndị ọrụ nwere ọtụtụ ohere iji ya. Newdị kachasị ọhụrụ bụ POV Mode, nke na-enye gị ohere ịmepụta ndekọ nke ogo 360 na axes atọ, maka mmetụta dị omimi karị.
Anyị nwere ike jiri Zhiyun SMOOTH-Q2 a jiri ekwentị gam akporo na iPhone Na ụzọ dị mfe. Agbanwewo ya iji rụọ ọrụ nke ọma na sistemụ arụmọrụ na nke a. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ọrụ ga-adabere n'ụdị a kapịrị ọnụ, ya mere nkọwa kwesịrị ịdị na-enyocha mgbe niile, iji mata ụdị ma ọ bụ ọrụ nwere ike iji rụọ ọrụ na nke ọ bụla na mbinye aka gimbal. Na mkpokọta, ọ bụghị ihe na-eweta nsogbu, yabụ anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ụdị na ọrụ ya dị mfe.
Ojiji ya dị mfe, dịka anyị kwurula, nke a gosipụtara na imewe. Na nke a SMOOTH-Q2 anyị nwere ike ịhụ n'oge niile na ọ dị mfe itinye ya na nkwado iji ya. Ọ dịkwa nnọọ mfe iji wepu ekwentị mgbe anyi mechara iji gimbal anyway. Ọ gaghị ewere ihe ọ bụla iji mee mmegharị a, nke mere na-enye aka iji ya mee ihe n'ụzọ dị mma n'ụdị ọnọdụ niile. Oke kachasị na ọ na-akwado na nke a bụ gram 260, nke a na-agaghị agabiga, n'ihi na ekwentị dị mfe, mana ọ dị mma ịmara na nke a bụ oke nke gimbal na-enye ohere.
Na mgbakwunye, anyị nwere ike na-adị mfe bugharia ọnọdụ nke ekwentị na gimbal a. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike idekọ ụdị vidiyo niile, ma ọ bụ na ntanetị ma ọ bụ na ntanetị. Ọzọkwa ọ bụrụ na anyị chọrọ ịdekọ onwe anyị ma ọ bụ jiri ndụ Zhiyun gimbal mee mgbasa ozi dị ndụ ọ ga-ekwe omume. Ihe nwere ike ịrụ ụka adịghị ya na ọtụtụ ndị ọrụ nwere mmasị, ndị chọrọ inwe ike ịme vidiyo dị ndụ nke kwụsiri ike ma gbanwee oge ọ bụla. Akụkụ ọzọ dị mkpa na ihe nlereanya a nke akara ndị China, ya mere.
Dịka ị pụrụ ịhụ, SMOOTH-Q2 a sitere na akara ndị China E gosipụtara ya dị ka gimbal zuru ezu na nke dịgasị iche, nke anyị ga-enwe ike iji n'ọnọdụ ọ bụla. Nta ya na ịdị mfe nke iji ya emee ka ọ bụrụ nhọrọ dị mma ịtụle na mpaghara ahịa a maka ọtụtụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere gimbal a na otu ị ga - esi mee ya, tinye ụlọ ọrụ weebụ. Ebe ị ga-ahụ data niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » OWO-Q2: Gimbal nke si n'akpa uwe Zhiyun
Nke a bụ GoPro Hero ọhụrụ 8 Black, ngwa ya na Max
Etu esi ewepu nọmba ekwentị gị na Facebook